को हुन् सामाजिक सञ्जालमा भाइरल यी सुन्दरी ? हेर्नुस् उनका ३५ तस्वीर::Nepalese News Portal
हालै इन्टरनेटमा भाइरल यी युवती को हुन् ? नझुक्किनुहोला हेर्दा नेपाली जस्तै लाग्ने यी युवती नेपाली भने होइनन् । हाल इन्टरनेटमा भाइरल भएकी यी युवती को हुन् त त्यसोभए ? सबैको मनमा खुल्दुली आउन सक्छ । पछिल्लो समय विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा यीनको प्रोफाइल फोटोहरु धेरै देख्न सकिन्छ । अझ यीनको फोटो प्रयोग गरेर अरु नै युवतीको नाममा फेसबुक आइडीहरु खोलेर झुक्काउनेहरुको पनि कमि छैन ।
देख्दा नेपाली जस्तै देखिने यी युवती म्यान्मारकी हुन् । यीनको नाम मेपन्चि हो तर यिनको वास्तविक नाम भने मे पन्चि सो नायुङ हो । उनको बाबुले सानैमा उनको नाम परिवर्तन गरेर मेपन्चि मात्र राखे जस्को वास्तविक अर्थ मिस पेन्टर हो ।
को हुन् त मेपन्चि ?
युवा अवस्थामा सबैले आफ्नो जीवनको भविष्य र एउटा बोकेका हुन्छन् । कसैले सपना पुरा गर्छन् त कोहि सपना पुरा गर्न चुक्छन् । मेपन्चिको सपना भने कलाकार र पेन्टर बन्नु थियो । त्यसैले उनका बुवाले उनको नाम परिवर्तन गरेका थिए । मेपन्चि पेन्टर पनि हुन् । उनले कमेडि फिल्ममा अभिनय समेत गरेकी छन् । उनी एक असफल गायिका पनि हुन् ।
हेर्नुहोस् उनका केहि भाइरल तस्वीरहरु :